ကြားဖူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၁) - Myanmar Network
ကြားဖူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၁)
Posted by Language Republic on November 19, 2014 at 17:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသုံးစွဲရာတွင်ကျွန်တော်တို့ ရာပေါင်းများစွာသောစကားလုံးများ ၊ အဆိုများကိုအသုံးပြု၏။ ထိုကဲ့သို့ သုံးစွဲစဉ်တွင်လည်း ၎င်းစကားလုံးများ၊ အဆိုအမိန့်များမည်ကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်လာသည် မည်သည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ကို တစ်ခါတစ်လေမျှပင် စဉ်းစားမိမည် မဟုတ်ချေ။
‘To be above board’ ဆိုတာ ‘ ထင်သာမြင်သာရှိသည်’ ‘ရိုးသားပွင့်လင်းသည်’ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဖဲကစားသည့် စားပွဲ card table (board) ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စကားရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖဲကစားရာမှာ ဖဲလိမ်ရိုက်သူတွေဟာ လက်ကိုစားပွဲအောက်မှာထားလေ့ရှိပြီး ဖဲချပ်လဲကာ ကလိမ်ကကျစ် ကျတတ်ပါတယ်။ မိမိလက်ကိုအများမြင်နိုင်အောင် စားပွဲပေါ်မှာဘဲ တင်ထားသူဟာ လိမ်လည်မှု လုပ်သူမဟုတ်ဘဲ ရိုးသားသူ ဖြစ်ကြောင်းသက်သေ ပြနိုင်ပါတယ်။
An arrangement or deal that is above board is legal and is being carried out openly and honestly.
He didn't do anything improper; it was all above board.
ရှေးဟောင်းဂရိပုံပြင် တစ်ပုဒ်မှာ Trojan စစ်ပွဲရဲ့ သူရဲကောင်း ဖြစ်လာမယ့် Achilles ကို မွေးကင်းစအရွယ်မှာ သူ့ရဲ့ မိခင် Thetis က သူ့သားကို သေကြေပျက်စီးခြင်း ကင်းရန် အလို့ငှာ Styx မြစ်ထဲမှာ ကလေးကို ရေစိမ် သတဲ့။ အဲဒီလိုရေစိမ် (ရေနစ်) ရာမှာ ကလေးကိုခြေဖနောင့် တစ်ဖက်ကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဇောက်ထိုးနှစ်တာဖြစ်လို့ တကိုယ်လုံး ရေစိမ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီခြေဖနောင့် တစ်ဖက်ကတော့ ရေမထိဘဲကျန်ခဲ့သတဲ့။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဂရိသူရဲကောင်းကြီး Achilles ဟာရေမထိခဲ့တဲ့ ခြေဖနောင့် အားနည်းချက် (weak spot) နဲ့ အရွယ် ရောက်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ အဲ့ဒီခြေဖနောင့်ကို မျှားမှန်ကာ သေပွဲဝင်ခဲ့ ရရှာတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ အားနည်းချက်ကို Achilles heel လို့ တင်စားပြီးပြောကြတယ်။
His Achilles heel is, he likes his food too much.
This is my one weakness, my Achilles heel, if you will.
A misbehaving minister is regarded asagovernment's Achilles heel and is expected to resign.
ခေတ်ပေါ် အသုံးအနှုန်းမှာတော့ တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ ခိုင်မာမှု၊ မှန်ကန်မှု စသည် ကိုစမ်းသပ်တာကို တင်စားထားတာပါ။ ဒီစကားရပ်က ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကတော့ ခန့်မှန်းရလွယ်ပါတယ်။ သတ္ထုတစ်စကို ရွှေ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ရင် အက်စစ်နဲ့ စိမ်ကြည့် ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရွှေစစ်ရင် အက်စစ်က မစားနိုင်လို့ပါ။ Medieval ခေတ်တုန်းက အက်စစ်ကို Latin နာမည် Aqua Regia နဲ့လည်းခေါ်ကြတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ‘royal water’ ခေါ်တဲ့ ရေဘုရင် ၊ ရေဧကရာဇ် လို့ဘဲပြောမလား။ သတ္ထုအားလုံးကိုအရည်ဖျော်ပြစ်နိုင်တဲ့ သတ္တိရှိလို့လေ။
The case is an acid test of the justice system.
အသုံးများသော အီဒီယမ် (၁၀) ခု
Permalink Reply by thinkhaingsoe on November 25, 2014 at 17:28
Permalink Reply by aungnaingthu on November 30, 2014 at 16:27
Permalink Reply by Aung Win Naing on December 5, 2014 at 13:15